Archive du 20200908
Resabe momba ny fahasalamany Nivoaka tamin’ny fahanginany ny PM
Tsy re tsaika tao anatin’ny fotoana ela ny Praiminisitra Ntsay Christian, ary nisafidy ny hiloa-bava amin’izay omaly alatsinainy 07 septambra maraina teo am-pahatongavana tao amin’ny Lapan’i Mahazoarivo, araka ny vaovao azo. « Be dia be moa ilay resaka hoe : aiza ny Praiminisitra, maninona izy…
Naina Andriantsitohaina Sasatry ny mamono afo…
Tototry ny kiana sy ny adihevitra ny ben’ny tanànan’Antananarivo Atoa Naina Andriantsitohaina amin’izao fotoana izao. Sasatry ny mandamin-dresaka amina toe-javatra maro na eo aza ny karazana fampisehoan-kery, raha tsy hilaza afatsy ny fandrodanana tsena sy trano,
Miakatra ny maripana politika Nitory eny amin’ny HCC ireo loholona
Manoloana ny fahitan’izy ireo tsy fanarahan-dalàna nataon’ny fitondram-panjakana tamin’ny fandraisana fanapahan-kevitra mahakasika ilay volavola-dalàna laharana faha 001/2020, dia nanatitra taratasy fitoriana tamin’ny fepetra narahina mahakasika ny “texte à valeur legisl
Fitsinjarana ny faritra ho 23 Nihaona tamin’ireo Ampanjaka ny Filoha
Nihaona tamin’ireo Ampanjaka voafidy tao amin’ny faritr’i Vatovavy Fitovinany omaly ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina. Maro ny lahadinika nifanaovana saingy ny niompanana indrindra kosa dia ny mikasika ny resaka fitsinjaram-paritra 22 ho lasa 23, raha fampitam-baovao.
Andry Rajoelina « Efa vonona ny tetibola ho an’ny faritra faha-23 »
Noraisin’ny Filoham-pirenena teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha omaly ireo Ampanjaka, Raiamandreny ara-drazana, solombavambahoaka avy any amin’ny Faritra Vatovavy Fitovinany omaly.
Suisse - Madagasikara Mamisavisa ny ho avy ny roa tonta
Nitsidika tamim-pomba fanajana ny minisitry ny Fitsarana teny Faravohitra omaly , ny Ambasadaoron’ny Kaonfederasiona Soisa ho an’ny Repoblikan’i Madagasikara,
Tsarasaotra Noraisim-potsiny ilay inspektera sandoka
Mpitondra moto iray tsy nanao aroloha no nosakanan'ny Polisy avy ao amin'ny Troisième Compagnie d'Intervention tetsy Tsarasaotra ka saika tsy nety hijanona ary nilaza fa mahafantatra Polisy ka hiantso izany raha tsy avela handeha izy, hoy ny fampitam-baovaon’ny Polisim-pirenena.
Fanafihana mpitrandraka vatosoa 8 no naiditra am-ponja eny Antanimora sy Tsiafahy
16 mianadahy no tra-tehaky ny mpitandro ny filaminana tamin’ilay raharaha fanafihana mpitrandraka vatosoa nitranga tany Vohitrarivo Ambohibary Vohilena, distrikan’Anjozorobe ny 29 Aogositra lasa teo.
Fifandimbiasana arak’asa Mpitsara 122 no nafindra toerana
Dingana tsy maintsy tanterahina ary tafiditra ao anatin` ny politikan` ny fitsarana ny famindran-toerana ho an` ireo mpitsara mihoatra ny dimy taona eo amin`ny toerana iray.
Toetry ny andro Rahona avy any atsinanana no mitondra hatsiaka
Na dia mbola mahare mamirifiry ihany aza isika eto an-drenivohitra sy amin’ny faritra maro tato anatin’ny andro vitsivitsy izay dia fantatra fa tsy vokatry ny hatsiaka nateraky ny vanim-potoanan’ny ririnina intsony izany.
Lehiben’ny fiarovana ara-diplaomatika Amerikanina Nihaona tamin’ny Minisitry ny filaminam-bahoaka
Tonga nitsidika ara-pomba am-panajana ny Minisitry ny filaminam- bahoaka Contrôleur Général de Police Randrianarison Fanomezantsoa ny lehiben'ny fiarovana ara-diplomatika Amerikanina vaovao Kimpston Scott.
Antsirabe II Mpitrandraka vato an-tsokosoko 12 voasambotra
Mpitrandraka vato an-tsokosoko niisa 12 no voasambotra nanomboka ny farapararan’ny herinandro lasa teo, fa sarona nitrandraka tao anatin’ny faritra arovana ao Ibity, distrikan’Antsirabe faharoa.
Tontolon` ny fitsarana Fitsarana ambaratonga voalohany 10 sy fonja 14 no hatsangana
Nitondra fanazavana mahakasika ireo fotodrafitrasa sy fanatsarana ireo voafonja eto Madagasikara ny Minisitry ny Fitsarana, Johnny Andriamahefarivo, izay politika voizin` ny fanjakana.
Taratasim-panjakanana Mila fanarenana goavana ny birao
Tranon-kala eny ambanin’ny tohatra sy eo amin’ny tolanam-baravarana, ny gorodona maloto, ny trano tery saingy birao fikarakarana taratasim-panjakana eto an-drenivohitra anefa izany.
Miditra amin’ny ahamehana ara-pahasalamana andiany faha 13 isika ankehitriny.
Analanjirofo Nahazo baka vaovao Vohilego sy Ambatoaranana
Afa-pahasahiranana ny mponina ao amin`ny Kaominina Vohilego sy Ambatoaranana, Distrika Fenerive Est, Faritra Analanjirofo satria dia nahazo baka vaovao.
Tobim-piantsonana fasan’ny Karana Marobe sahady ireo nanao famandrian-toerana
Taorian’ny kabarin’ny Filoham-pirenena afak’omaly Alahady alina mikasika ny fisokafan’ny zotra nasionaly sy rezionaly amin’ny lalam-pirenena fahafito sy
Fanadinana CEPE Anjaran’i Fianarantsoa sy Mahajanga indray anio
Kandida miisa 165.294 no hiatrika ny fanadinana CEPE ao Fianarantsoa, izany hoe, faritra Matsiatra ambony, Amoron’Imania, Vatovavy fitovinany, Atsimo atsinanana, Ihorombe sy ao Mahajanga, izany hoe Sofia, Boeny, Melaky, Betsiboka ho amin’ity anio ity. Araka
Polisy any amin’ny Faritra Atsinanana Nafaran’ny Minisitra mba hiasa tsara
Nitsidika ny faritra Atsinanana ny Ministry ny Filaminam-bahoaka ny controleur general Rafanomezantsoa Rodellys ny faran’ny herinandro. Nisy ny fihaonany mivantana tamin’ireo tompon’andraikitra tany an-toerana ka nandinihina zavatra maro loha.
Tsy fahazoana fanampiana Nanakan-dàlana ny mponin’Ambohijanaka
Nidina an-dalambe ny mponina teny Ambohijanaka omaly noho ny fisitrahana vatsy tsinjo sy tosika fameno. Nahazo Bongatsara, Andoharanofotsy, Ankaraobato, Ifarihy,…
Posy sy sarety Mety ny tsena hatramin’ny nisian’ny Vatsy Tsinjo
Nandeha be tokoa ny asan’ireo mpitarika posy sy sarety eto an-drenivohitra hatramin’ny nisian’ilay hetsika fizarana Vatsy Tsinjo hataon’ny Fitondram-panjakana.
Coronavirus 2 maty, 51 marary mafy
Olona 02 no indray namoy ny ainy vokatry ny coronavirus, ka nampiakatra ny isa hatrizay ho 202, araka ny tatitry ny Pr Vololontiana Hanta omaly. Ny iray tany Matsiatra Ambony ary iray tany Atsimo Andrefana.
Fahamehana ara-pahasalamana Miomana amin’ny mbola hitohizany ny olom-pirenena
Miditra amin’ny fahamehana andiany faha 13 isika ankehitriny. Izay tsy mahay tsianjery ireo fepetra tokony arahana tao anatin’izay tapa-bolana in-12 nifanesy izay kosa angamba efa tsy ho andairan’izany intsony.
Fanohizana ny fahamehana Lasa fahazaran-dratsy ho an’ny mpitondra
Niditra tamin’ny fahamehana faha-13 ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara, araka ny tatitry ny Filankevitry ny minisitra ny sabotsy 05 septambra lasa teo.
Kaominina Ivato Tsy tafiditra eo am-bavahady izay tsy manao arotava
Miezaka hatrany manohy ny ady hatao amin’ny valan’aretina COVID 19 ny kaominina Ivato, tarihin’ny Ben’ny tanana Penjy Randrianarisoa.